Amazon ayaa ka dhamaatay Apple TV 4k saacadood kadib markii ay iibisay | Waxaan ka socdaa mac
Amazon ayaa ka dhamaatay Apple TV 4k saacadood kadib markii ay iibisay
Amazon iyo Apple waxay sameeyeen nabad. Intii lagu guda jiray 2017 waxaa lagu dhawaaqay in Amazon ay dib u iibinayso Apple TV websaydhka iibka alaabada. Wadaxaajoodyadu intaas kuma joogsan, maxaa yeelay dhawr maalmood ayaan arki karnaa waxa ku jira Prime Video jiilka 3-aad iyo 4-aad ee Apple TV-yada, mahadnaqa barnaamijka Amazon ee dhawaan laga sii daayay Apple TV. Taa baddalkeeda, mid ka mid ah heshiisyada ayaan u socon sidii la filayay. Waxaan ka hadlaynaa qadarka Apple TV 4k ee ay Amazon ku lahayd keydka iibka. Haddii aad si sax ah u akhrido, way lahayd, si fiican way u dhammaadeen.
Waddammada oo dhan kuma wada yaal TV-ga Apple 4k bogga Amazon. Tusaale ahaan, kuma muuqato bogga Isbaanishka. Laakiin Haddii aad tagto bogga caalamiga ah ee Amazon, farriin ayaa nooga digeysa in badeecada aan la heli karin. Farriinta ayaa tilmaamaysa "si ku meelgaar ah in ay ka maqnaato"
Si loo fahmo, waa inaan u aragnaa arrinta aragti ahaan. Qalabkan multimedia wuxuu ka helayaa waxyaabo aad uga badan gudaha Mareykanka marka loo eego qaybaha kale ee adduunka. Qaybta cusub ee la soo saaray Ciyaaraha Tooska ah, weli lagama helin wadamada badankood.
Dhinaca kale, boqolley badan oo adeegsadayaasha Amazon ee Mareykanka ayaa qandaraas ku qaatay Prime Video. Sidaa darteed, labadan adeeg ee cusub waxay keeneen in la kordhiyo iibka iyo in la kordhiyo baahida loo qabo adeegga fiidiyowga ee Amazon. Xaqiiqdii, maalmo ayaa laga joogaa tan iyo markii Apple waxay ku dhawaaqday inaysan heysan qaab 64 Gb ah 4 ilaa 5 todobaad oo kale.
Ficilladan, Apple iyo Amazon waxay arkeen isdhaafsiga heshiiskoodu keeni karo iyo malaayiinta doolar ee ay lumi doonaan laga soo bilaabo Oktoobar 2015, markii ay joojiyeen is fahamkii markay joojiyeen iibinta Apple TV. Apple, dhinaceeda, waxay muujisay inaysan jirin meel adeegga fiidiyowga ee Amazon. Waxaas oo dhan waxaa la xaliyay markii heshiiska ayaa lagu dhawaaqay shirkii ugu dambeeyay ee horumariyaha ee bishii Juun ee la soo dhaafay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Amazon ayaa ka dhamaatay Apple TV 4k saacadood kadib markii ay iibisay
U beddel Apple Watch-gaaga saacad jeeb ah
Poland waxay ku raaxeysan doontaa Apple Pay horaanta 2018